Wararka Gudaha	Ciidamada shisheeye iyo shacabka Muqdisho.
Shalay askarta shisheeye ee xamar joogta waxay deegaanka lambar afar nin oday ah ku jiirsiiyen gaari gaashaaman oo ay wateen iyadoo dhaawac daran ka gaaray mid ka mid ah labadiisa lugood. Dabadeed shacabka ayaa aad u carooday waxaanay isku hor gooyeen gaarigii arintaasoo shisheeyaha caqabad ku noqotay. Midka mid ah dadka muqdisho oo ay wareysatay Idaacadda Islaamiga ah ee Alfurqaan ...	Read More »
Soomaali badan ayaa naftooda biimo geliyay kuwaasoo qaarkood ay badaha galeen iyagoo saaran doomo aad u liita kuwana waxay ku lugeeyeen dhul saxaro ah oo aan biyo iyo baad, iyo geed la harsado toona lahayn. Arintaa oo mudda dheer soo socatay waxay keentay in badan oo ka mid ah in ay dhintaan intii ay safarka ku jireen. Dhawaan doon ku ...	Read More »
Maxaad ka taqaan haruubka soomaalida Cadawgeedu ku maalo?
Shisheeyaha iyo intii xumaan doonuhu waxay Soomaalida ku maalaan haruubka qabyaaladda kaasoo kolkii loo soo qaato ay badankeed si dhaqso leh u godlato. Qabyaaladdu waxay qurmisay qalbiyada in badan oo Soomaalida ka mid ah waxaanay ka raariday meel qar iyo booraan ah. Abwaan Cabdulaahi Suldaan Tima cadde waa kii lahaa dugsi male qabyaaladu waxay dumiso mooyaana. Hadda Soomaaliya waxaa ka ...	Read More »
Warka Subaxnimo waxaa lagu soo qaatay qodobo kala duwan ee ka dhageyso qeybta Hoose Dhageyso Warka subax 24 04 2016.	Read More »
Dhuuxa wareysiyada waa barnaamij mug weyn leh oo habeen walba ka baxa war baahinta islaamiga ah ee Al-furqaan, waxaa lagu soo qaataa wararkii u dambeeyay iyo wareysiyo muhim ah oo dhinacyo kala duwan lala yeesho. Halkan Ka Dhageyso Dhuuxa wareysiyada 23 04 2016	Read More »
Warka Duhur waxaa lagu soo qaatay qodobo kala duwan ee ka dhageyso qeybta Hoose. Halkan Ka Dhageyso Warka Duhur 23 04 2016	Read More »
Warka Subaxnimo waxaa lagu soo qaatay qodobo kala duwan ee ka dhageyso qeybta Hoose Dhageyso Warka Subax 23 04 2016.lite	Read More »
Dhacdooyinka dunida islaamka waa barnaamij todobaadle ah oo lagu soo qaato dhacdooyinka dunida islaamka kuwooda ugu waaweyn iyo kalimado wacdi iyo waano ah oo ay jeediyaan qiyaadada iyo culimada rabaaniyiinta ee dunida muslimka. Dhacdooyinka Dunida islaamka 22 04 2016	Read More »
Dhageyso Barnaamijka Diiradda Jimcaha oo Looga Hadlay Dhallinyaradii Soomaaliyeed Ee Badda Ku Le’atay.
Barnaamijka Diiradda Jimcaha oo todobaadkiiba maanta oo kale ka baxa war baahinta islaamiga ah ee Al-furqaan loogana hadlo mawaadiic muhim ah, ayaa waxaa maanta lagu lafa guray dhallinyaradii Soomaaliyeed ee badda ku le’atay iyagoo usii tahriibaya wadamada Yurubta. Barnaamijka oo ay ka qeyb galeen culimo iyo duqey Soomaaliyeed ayaa waxaa si gaar ah diiradda loogu saaray waxa u sababta ah ...	Read More »
Dhageyso:Dhuuxa Wareysiyada Alfurqaan
Dhuuxa Waa Barnaamij Mug weyn oo lagu faaqido arimaha siyaasada Soomaaliya iyo dhacdooyinka Maalinlaha ee dhacaya. Dhageyso Dhuuxa Waraysiyada 21 04 2016.lite	Read More »
Page 143 of 174« First...120130140«141142143144145	»	150160170...Last »	GURMADKA ABAARAHA MUDUG TARTANKA MACAAHIDA BAY IYO BAKOOL	Daawo: Al-Ixsaan Iyo Daryeelka Bulshada (Qeybta 4-aad)	https://t.me/RadioAlfurqaan